VAR ကြောင့် အမှတ်အတိုးအလျော့ကို လေ့လာကြည့်ခြင်း – Sports A2Z
ဒီရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းတွေအတွက် VAR ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုလက်ထောက်ဒိုင်နည်းပညာကို အကူအညီ ရယူသုံးစွဲထားခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ အငြင်းပွားစရာဖြစ်သလို ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲရဲ့ ရသတွေ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ ပြစ်တင်မှုတွေလည်း ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒိုင်တွေအနေနဲ့လည်း နည်းပညာကို ရယူသုံးစွဲရာမှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေသေးတာကို မြင်ခဲ့ရပြီး တချို့ကတော့ Pitch-Side Monitor ကို ကြည့်ရကောင်းမှန်း မသိတာတွေကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
VAR FOR STERLING TACKLE ?
? Download the @SkySports app! pic.twitter.com/o8HzP28JB6
အငြင်းပွားဖွယ်ရာအဖြစ်ဆုံးကိစ္စတွေမှာတော့ အနီကတ်ပြသမှုတွေ ပင်နယ်တီရမှုတွေ မဆိုစလောက်ကလေး လူကျွံလို့ မရခဲ့တဲ့ ဂိုးတွေကလည်း ပါဝင်နေပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ ခြေကျင်းဝတ်ကို တက်နင်းတဲ့သူတိုင်းကို VAR နဲ့ ထုတ်ပယ်နေချိန်မှာ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်မို့ အဝါပဲ အပြခံခဲ့ရတာလားလို့ မေးခွန်းထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ရာဟင်းမ် စတာလင်ရဲ့အဖြစ်နဲ့ သူ့ခြေထောက်ကို ဆွဲခဲ့သလို ပင်နယ်တီကာကွယ်ချိန်မှာ ဂိုးစည်းရှေ့ရောက်နေတဲ့ ဟူဂို လိုရစ်ရဲ့ ကျူးလွန်မှုတွေ လွတ်မြောက်သွားခဲ့တာကလည်း ဒီနည်းပညာရဲ့ ချွတ်ချော်မှုတွေအဖြစ် ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒီနည်းပညာကို အသုံးပြုခဲ့တဲ့ရာသီမှာ ဘယ်အသင်းတွေက အကျိုးအမြတ် အများဆုံးရခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ နစ်နာမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကို လေ့လာဆန်းစစ်မှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းတစ်ရပ်ကို Sky Sports ဖော်ပြခဲ့ပြီး အကျိုးအရှိဆုံးက မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ အနစ်နာခဲ့ရဆုံးကတော့ ရှက်ဖီးလ်ယူနိုက်တက်နဲ့ လက်စတာစီးတီးတို့ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
VAR ကြောင့် အမှတ်ကွာခြားမှု – မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် (၃ မှတ်)၊ ဘုန်းမောက်၊ ခရစ္စတယ်လ်ပဲလေ့စ်၊ နယူးကာဆယ်လ်ယူနိုက်တက်၊ ဝတ်ဖို့ဒ် (၁ မှတ်)၊ ဘန်လေ (၀ မှတ်)၊ အာဆင်နယ်၊ ဘရိုက်တန်၊ အဲဗာတန်၊ ဆောက်သမ်တန်၊ နော့ဝစ်ခ်ျ (- ၁ မှတ်)၊ ချဲလ်ဆီး၊ လီဗာပူးလ်၊ မန်ချက်စတာစီးတီး၊ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါးစ်၊ ဝုလ်ဗာဟမ့်ပတန် ဝမ်းဒါးရားစ် (- ၂ မှတ်)၊ အက်စတန်ဗီလာ၊ ဝက်စ်ဟမ်းယူနိုက်တက် (- ၃ မှတ်)၊ ရှက်ဖီးလ်ဒ်ယူနိုက်တက်၊ လက်စတာစီးတီး (- ၅ မှတ်)။
ပရိသတ်တွေရဲ့ VAR အပေါ်အမြင်ကို စစ်တမ်းကောက်ယူရာမှာတော့ နည်းပညာရဲ့ ကောင်းမွန်မှုဘက်က အားမသာခဲ့ဘဲ သိပ်ကို ဆိုးရွားတယ်လို့ ထင်တဲ့သူက ၂၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ နည်းနည်းဆိုးတယ်လို့ ထင်တဲ့သူက ၃၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကြားနေခဲ့ကြတဲ့သူက ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ နည်းနည်းကောင်းတယ်လို့ ထင်တဲ့သူ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ အရမ်းကောင်းတယ်လို့ ထင်တဲ့သူက ၄ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ မသိကြောင်းဖြေကြသူက ၁ ရာခိုင်နှုန်းလို့လည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းတွေထဲမှာ အနစ်နာဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရှက်ဖီးလ်ဒ်ယူနိုက်တက်နဲ့ လက်စတာစီးတီးတို့ကတော့ VAR ကြောင့် သူတို့ရဲ့ အကျိုးရှိစေနိုင်မယ့် ဂိုးအခွင့်အရေး ဒါမှမဟုတ် ပင်နယ်တီ စုစုပေါင်း ၅ ကြိမ်အထိ နစ်နာခဲ့ရကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
UNICODE: ဒီရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂျအသငျးတှအေတှကျ VAR ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုလကျထောကျဒိုငျနညျးပညာကို အကူအညီ ရယူသုံးစှဲထားခဲ့ပွီး ပရိသတျတှအေတှကျတော့ အငွငျးပှားစရာဖွဈသလို ဘောလုံးပှဲတဈပှဲရဲ့ ရသတှေ ပြောကျဆုံးသှားခဲ့တယျလို့ ပွဈတငျမှုတှလေညျး ရှိနခေဲ့ပါတယျ။ ဒိုငျတှအေနနေဲ့လညျး နညျးပညာကို ရယူသုံးစှဲရာမှာ လိုအပျခကျြတှေ ရှိနသေေးတာကို မွငျခဲ့ရပွီး တခြို့ကတော့ Pitch-Side Monitor ကို ကွညျ့ရကောငျးမှနျး မသိတာတှကေိုလညျး တှခေဲ့ရပါတယျ။
အငွငျးပှားဖှယျရာအဖွဈဆုံးကိစ်စတှမှောတော့ အနီကတျပွသမှုတှေ ပငျနယျတီရမှုတှေ မဆိုစလောကျကလေး လူကြှံလို့ မရခဲ့တဲ့ ဂိုးတှကေလညျး ပါဝငျနပွေီး ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျဂနှနေကေ့တော့ ခွကေငျြးဝတျကို တကျနငျးတဲ့သူတိုငျးကို VAR နဲ့ ထုတျပယျနခြေိနျမှာ အင်ျဂလနျလကျရှေးစငျမို့ အဝါပဲ အပွခံခဲ့ရတာလားလို့ မေးခှနျးထုတျခံခဲ့ရတဲ့ ရာဟငျးမျ စတာလငျရဲ့အဖွဈနဲ့ သူ့ခွထေောကျကို ဆှဲခဲ့သလို ပငျနယျတီကာကှယျခြိနျမှာ ဂိုးစညျးရှရေ့ောကျနတေဲ့ ဟူဂို လိုရဈရဲ့ ကြူးလှနျမှုတှေ လှတျမွောကျသှားခဲ့တာကလညျး ဒီနညျးပညာရဲ့ ခြှတျခြျောမှုတှအေဖွဈ ဝဖေနျခံခဲ့ရပါတယျ။
ဒီနညျးပညာကို အသုံးပွုခဲ့တဲ့ရာသီမှာ ဘယျအသငျးတှကေ အကြိုးအမွတျ အမြားဆုံးရခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ နဈနာမှုအမြားဆုံးဖွဈခဲ့သလဲဆိုတာကို လလေ့ာဆနျးစဈမှုတဈရပျ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ စဈတမျးတဈရပျကို Sky Sports ဖျောပွခဲ့ပွီး အကြိုးအရှိဆုံးက မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျနဲ့ အနဈနာခဲ့ရဆုံးကတော့ ရှကျဖီးလျယူနိုကျတကျနဲ့ လကျစတာစီးတီးတို့ ဖွဈခဲ့ကွပါတယျ။
VAR ကွောငျ့ အမှတျကှာခွားမှု – မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ (၃ မှတျ)၊ ဘုနျးမောကျ၊ ခရစ်စတယျလျပဲလစျေ့၊ နယူးကာဆယျလျယူနိုကျတကျ၊ ဝတျဖို့ဒျ (၁ မှတျ)၊ ဘနျလေ (၀ မှတျ)၊ အာဆငျနယျ၊ ဘရိုကျတနျ၊ အဲဗာတနျ၊ ဆောကျသမျတနျ၊ နော့ဝဈချြ (- ၁ မှတျ)၊ ခြဲလျဆီး၊ လီဗာပူးလျ၊ မနျခကျြစတာစီးတီး၊ တော့တငျဟမျ ဟော့စပါးဈ၊ ဝုလျဗာဟမျ့ပတနျ ဝမျးဒါးရားဈ (- ၂ မှတျ)၊ အကျစတနျဗီလာ၊ ဝကျဈဟမျးယူနိုကျတကျ (- ၃ မှတျ)၊ ရှကျဖီးလျဒျယူနိုကျတကျ၊ လကျစတာစီးတီး (- ၅ မှတျ)။
ပရိသတျတှရေဲ့ VAR အပျေါအမွငျကို စဈတမျးကောကျယူရာမှာတော့ နညျးပညာရဲ့ ကောငျးမှနျမှုဘကျက အားမသာခဲ့ဘဲ သိပျကို ဆိုးရှားတယျလို့ ထငျတဲ့သူက ၂၆ ရာခိုငျနှုနျး၊ နညျးနညျးဆိုးတယျလို့ ထငျတဲ့သူက ၃၄ ရာခိုငျနှုနျး၊ ကွားနခေဲ့ကွတဲ့သူက ၁၂ ရာခိုငျနှုနျး၊ နညျးနညျးကောငျးတယျလို့ ထငျတဲ့သူ ၂၃ ရာခိုငျနှုနျး၊ အရမျးကောငျးတယျလို့ ထငျတဲ့သူက ၄ ရာခိုငျနှုနျးနဲ့ မသိကွောငျးဖွကွေသူက ၁ ရာခိုငျနှုနျးလို့လညျး တှခေဲ့ရပါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျအသငျးတှထေဲမှာ အနဈနာဆုံးဖွဈခဲ့တဲ့ ရှကျဖီးလျဒျယူနိုကျတကျနဲ့ လကျစတာစီးတီးတို့ကတော့ VAR ကွောငျ့ သူတို့ရဲ့ အကြိုးရှိစနေိုငျမယျ့ ဂိုးအခှငျ့အရေး ဒါမှမဟုတျ ပငျနယျတီ စုစုပေါငျး ၅ ကွိမျအထိ နဈနာခဲ့ရကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။